Io no mety ho mamihina ny tovovavy rehefa voalohany hitsena azy amin'ny olona. Daty amin'ny Frantsa - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Volana vitsivitsy lasa izay, nisy namana iray (tsy ny zazavavy, na"FWB") ary izaho dia mikasa ny diany sy nihaona tamin'ny olona izay liana amin'ny fandraisana lavitra sy ny fizarana ny vola lanyToy izany koa fa"Fiarahana"dia ny fahafahana hahita raha toa isika ka mandeha lavitra dia lavitra na ny fiara samy adala. Indray hariva dia nihaona tamin'ny vehivavy iray ho an'ny sakafo hariva (Thai) sy ny kafe. Avy eo, rehefa nanao veloma izy, dia nangataka anay,"Ireo dia ny elany. Dia namihina azy."Dia nihomehy ary namihina talohan'ny nandehanany. Tsara, mba ho azo antoka fa misy na inona na inona ny tantaram-pitiavana momba ny sakafo hariva, kafe, na ny famihinana, fa nisy hevitra. Heveriko fa izany dia miankina amin'ny toerana misy anao, fa amin'ny ankapobeny dia tsy mino aho fa hevitra tsara io. Ny mamihina dia feno fitiavana sy maneho ny endrika sasany-pitiavana, ka raha toa ka tsy hizara izany fahatsapana izany amin'ny lafiny roa, dia tokony hifidy ny tsara taloha"Arahaba, mahafinaritra ny miangavy anao"safidy. Ity na inona na inona ratsy.
Tsara, tsy ny rehetra ny tovovavy aina nitsotsotra teo ambony fandriana ny olona iray dia zara raha fantatrao, noho izany dia tsara kokoa raha toa ka afaka manolotra ny ara-dalàna ny tanany.
Matetika aho no mamihina ny vehivavy rehefa avy nihaona aminy, fa izaho koa dia matetika no mihaona ny olona izay ara-nofo tsara mampihetsi-po. Ary rehefa mivory aho, dia na (matetika) ireo ianao dia anontanio hoe:"Fa ianao nitsotsotra teo ambony fandriana izy.Fihina dia mety raha samy olona manaiky fa mety ary izany dia takatra."Aoka ny hoe ny fitsipika handao ny toerana ambanimbany kokoa ny fifandraisana, fa hisokatra ho ambony ireo raha toa ianao sy ny olona hafa tianao.
Hitsena ny lehilahy amin'ny Pune: fisoratana anarana
An Iorua Iascaireacht Físeán Saor In Aisce
chat ankizivavy roulette tsy Chatroulette amin'ny zazavavy video Mampiaraka izao tontolo izao Chatroulette fanompoana Mampiaraka chat Mampiaraka manerana izao tontolo izao ny lahatsary ny firaisana ara-nofo Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana video lahatsary internet aterineto tsy misy fisoratana anarana download amin'ny chat roulette mahazatra amin'ny sary sy video ny lahatsary amin'ny chat roulette fisoratana anarana